रोवर्टसँग बिहे गर्दै पोर्नस्टार मिया खलीफा
चर्चित पोर्नस्टार मिया खलीफाले आफ्नो प्रेमी रोवर्ट स्याण्डवर्गसँग लगनगाँठो कसेको खबर समाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी छिन् । उनको यो घोषणाले उनका धेरै प्रशंसकहरु अचम्मितमा परेका छन् । धेरैले मियाले विवाह गर्ने घोषणा गरेकी व्यक्तिबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । मियासँग विवाह गर्न लागेका रोवर्ट पेसाले सेफ.....
पछिल्लो ३० बर्ष पृथ्वीको वातावरण दुई हजार बर्ष यताकै उष्ण
विगत ३० बर्षमा पृथ्वीको वातावरणमा दुई हजार बर्ष यताकै उच्च तातोेपन महशुस गरिएको चिनियाँ तथा अमेरिकी वैज्ञानिकको संयुक्त अनुसन्धानले जनाएको छ । मानवसिर्जित हरितगृह ग्यासको प्रभावका कारण पृथ्वीको तापमानमा पछिल्लो समय उच्च वृद्धि देखिएको अनुसन्धानले देखाएको हो । चीनको दक्षिणपश्चिम यूनान प्रान्तको.....
चीनको अर्को चमत्कार !
चीनले विकासमा सबैलाई चकित बनाउँदै आएको छ । उसले फेरी विश्वलाई चकित बनाएको छ । चीनको दोस्रो लामो नदी ‘एलो रिभर’ को करिब आठ करोड क्युविक मिटर पानीलाई उत्तरी हेवेई प्रान्तको सिओनगान नयाँ क्षेत्रमा निर्मित प्रमुख तालमा मिसाइएको छ । त्योपनि ३ महिनाभित्रै यो काम पुरा भएको छ । नदीको पानीलाई करिब ४८२ किलोमिटर.....
जेनेभामा उठ्यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा
ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पुगेर सुगौली सन्धीमार्फत भारतले नेपालबाट लिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक रहेका नेपालले परिषदको ४० औं सत्रमा सो माग दर्ज गराएका हुन् । नेपालले आफ्नो मन्तव्यमा.....
बिरोधपछि अल्काले नेपालीसँग माफी मागीन
आम आदमी पार्टीकी सांसद अल्का लाम्बाले नेपालबारे गरेको अपमानजनक टिप्पणीबारे माफी माग्दै आफ्नो ट्वीट डिलिट गरेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलक्षित ट्वीट गर्दै उनले नेपालबारे अपमानजनक ट्वीट गरेकी थिइन् । ट्वीटपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । माफी माग्दै लाम्बाले लेखेकी.....
कुकुरलाई तीन भोटले पछि पार्दै बाख्रो मेयर बनेपछि………..
अमेरिकाको बरमोन्टस्थित सानो सहर ‘फेयर हेभन’ मा एक बाख्रोलाई मेयर बनाइएको छ। अमेरिकाको दक्षिणी किनारामा रहेको फेयर हेवनमा लिंकन नामको बाख्रालाई मेयर बनाइएको हो । लिकंन आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सैम्मी नामको कुकुरलाई तीन भोटले पछि पार्दै मेयर बनेको हो । मेयरका लागि कुकुर बिरालोलगायतका अन्य १५ जनावर.....
प्रहरी अधिकारीकी श्रीमती नै देहव्यापारमा लागेपछि……..
एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले देहव्यापार गर्ने गरेको खुलेको छ । लामो समयदेखि यो पेशमा लाग्दै आएकी श्रीमतीको बारेमा प्रहरी अधिकारीलाई पनि जानकारी छ । प्रहरी अधिकारीले यसको जानकारी प्रहरी कार्यालयलाई पनि गराएका छन् । यो घटनाले सबैजना चकित परेका छन् । यो घटना इङ्ल्याण्डको हो । प्रहरी अधिकारीले जब यो कुरा.....
चन्द्रमामा उम्रेको बिरुवाले रातको चिसो खप्न सकेन
चन्द्रमामा चीनको अन्तरिक्ष अभियानले उमारेका कपासका टुसाहरू मरेका चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अन्तरिक्ष अभियान चांगुअले लिएर गएका बीउहरू टुसाएको भन्दै चीनले मङ्गलवार तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको थियो। तर चन्द्रमामा गरिएको जैविक अनुसन्धानको यो उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा ती टुसाहरू मरेको जानकारी.....
२१ वर्षकी काईलि बनिन सबैभन्दा कान्छी अर्वपती
अमेरिकाकी काइली जेनर आफ्नै बलबुतामा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा कान्छी अर्बपति बनेकी छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को अर्बपति सूचिमा परेकी २१ वर्षीया जेनरले आफ्नो भाग्य शृङ्गारका सामानको व्यवसायबाट कोरेकी हुन्। उनको कम्पनी काइली कस्मेटिक्सले गत वर्ष मात्र आफ्नो बिक्रीबाट ३६.....
१० प्रसिद्ध ब्यक्तिहरु, जसले यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै ज्यान गुमाए !
मानिसहरु जन्मीए पछि एक दिन मर्ने पर्छ । यो एउता जन्म सिद्ध कुरा नै हो । अनि यो पनि भनिन्छ की मानिसको मृत्यु भन्ने कुरा कुनै बाजा बजाएर आउँदैन । जो सुन्दा तपाईहरुलाई अपत्यारिलो अनि अचम्मैको लाग्न सक्छ । विश्वमा मानिसहरु धेरै छन् । जो यौन सम्पर्कका बेलामा निधन भएका छन् । ति मध्ये हामी यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै.....